MR MRT: ချောက်နှစ်ဆင့်
"ဘာတွေလဲ ဒကာကြီး။ ဒကာကြီးတို့ ဆွမ်းလှည့်က မနေ့က မဟုတ်လား။"
"ဒီနေ့ တပည့်တော့် မွေးနေ့. .. .. . မုန့်ဟင်းခါးပါ ဘုရား။"
"အော်. .. . ကပ် ကပ် ကပ်။ ကျန်းမာ ချမ်း၊ ကျန်းမာချမ်း။"
"မေတ္တာလေး ဘာလေး ပို့ပေးပါ့အုံး ဘုရား။ တပည့်တော် မွေးနေ့ကျော်ရင် (၆၆) .. .. . ချောက်နှစ်ဆင့်ထဲ အကျမှာ ပြန်မတက်နိုင်တာမျိုး. .. .. . ဟုတ်သော်ရှိ မဟုတ်သော်ရှိ တပည့်တော် အနေနဲ့ ဗေဒင်ယတြာတွေ မယုံပေမယ့် . . . . . ဒကာမကြီးက တပည့်တော်အတွက် ဗေဒင်သွားမေးပြီး ကိုယ့်ဒု
က္ခကိုယ်ရှာ. .. .. . ချောက်ထဲ အဆင်းမှာ အသေဆိုးနဲ့ သေလိမ့်မယ် ဟောလိုက်လို့. .. .. . ဘာမဆိုင် ညာမဆိုင် အခု သူက မအိပ်နိုင် မစားနိုင်တွေဖြစ်ပြီး အိပ်ယာထဲ လဲနေလို့ ဆွမ်းပို့တာတောင် တပည့်တော် လာရတာ ဘုရား။"
"အင်း. .. .. . ဗေဒင်တွေ လက္ခဏာတွေ ဆိုတာကလည်း. .. .. . စွမ်းတဲ့ ​ဆရာကျတော့လည်း တကယ် စွမ်းပုံပဲ ဒကာကြီးရ။ ဘုရားလောင်း သိဒ္ဓတ္ထ မင်းသားလေးအတွက် ကောဏ္ဍညပုဏ္ဏား ဟောကိန်းထုတ်တာမျိုး . . . . . အလောင်းတော် မင်းသားဟာ ဘုရားစင်စစ် ဧကန်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ လက်ညှိုး တစ်ချောင်းတည်းထောင်ပြီး ဧကဧကန် ပြတ်ပြတ်သားသား ဟောချလိုက်တာပဲ။ သူကိုယ်တိုင်လည်း ရဟန်းပြုလိုက်ပြီး တရားဦးနာဖို့ စောင့်နေခဲ့တာ မဟုတ်လား။ ကျန်တဲ့ ဆရာတွေလည်း မင်းလိုလိုက် မင်းကြိုက်ခစား ဆိုတာလို အမှန်အတိုင်း ပြတ်ပြတ်သားသား မဟောရဲလို့သာ ဘုရားဖြစ်လိမ့်မယ်၊ သို့မဟုတ် စကြာမင်း ဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုပြီး ဝါးတားတား လုပ်ကြပေမယ့် တရားဦးနာဖို့ ရဟန်းဘဝနဲ့ စောင့်ခဲ့ကြတာပဲ မဟုတ်လား။"
"တင်ပါ့။ စာထဲမှာ ဖတ်ဖူးပါတယ် ဘုရား။"
"အင်း. .. .. . အခုဟာက ဒကာကြီး အသေဆိုးနဲ့သေမယ်လို့ ဟောတာက. .. .. . ဘယ်လို ဟောတာလဲ။ ကြိုးစင် တက်ရမှာတဲ့လား၊ သေနပ်မှန်မှာတဲ့လား၊ ဗုံးထိမှာတဲ့လား၊ လေယာဉ် ပျက်မှာလား၊ ကားမှောက်မှာတဲ့လား၊ မြွေပွေးကိုက်မှာတဲ့လား၊ အဆိပ်သင့်မှာတဲ့လား။ တိတိကျကျ ဟောသလား။ ဘယ် ဆရာက ဟောတာလဲ။ ဘုန်းကြီးလား၊ လူလား။"
"ဘုရာ့. .. .. .။"
"မဟုတ်ဘူး။ စေတနာနဲ့ ပြောတာ။ အရင်ကျောင်းထိုင် ဆရာတော်ကြီး ဦးစန္ဒန ပျံတော်မူတုန်းက ခြောက်ခြောက်ထဲ အဝင် ရက်ပိုင်းပဲ ရှိသေးတာ. .. .. .။ ခွေးရူးပျံရှာတာ။ အင်း သူ့အရင်က ဦးဉာဏောကြီးလည်း ခြောက်ခြောက်ထဲ အဝင်။ ပိုးထိတာ။ ကျောင်းဒကာကြီးလည်း ခြောက်ခြောက် အဝင်. .. .. ပိုးထိတာပဲ . . . . ။ ကျောင်းဒကာမကြီးလည်း ရှေ့ဆင့်နောက်ဆင့် ကားမှောက်လို့. .. .. .။"
"တပည့်တော် လုပ်စရာလေးတွေ ရှိသေးလို့. .. .. . ဦးတော်ပါ ဘုရား။"
"အေး. .. .. . သာဓု သာဓု။ သဗ္ဗေ သတ္တာ ကမ္မဿကာ. .. .. . ငါ့ဒကာကြီး. .. .. . ပြုပြုသမျှ ကံရဲ့အကျိုးမှန် အမြန်ဆုံး ခံစားရပါစေ ဗျား။"
01C. Articles - ေဆာင္းပါးမ်ား (163)
03. Poem - ကဗ်ာ (44)
ရေးတင်ပြီးသမျှ (လစဉ်) July (20) June (11) March (29) March (1) November (1) October (7) September (3) August (26) July (10) June (6) May (4) April (6) March (11) February (14) January (21) November (1) October (6) September (5) August (13) July (3) May (6) April (4) March (11) February (11) January (13) December (1) October (4) September (3) July (5) June (6) May (21) April (3) February (2) January (1) December (3) November (1) October (2) September (2) August (1) July (3) May (1) January (3) December (2) November (7) October (9) September (5) August (6) July (2) June (7) May (2) April (9) March (5) February (5) January (1) December (2) November (5) October (12) September (6) August (6) July (5) June (4) May (3) April (2) March (9) February (17) January (29) December (18) November (20) October (19) September (15) August (16) July (17) June (15) May (20) April (25) March (24) February (19) January (20) December (17) November (21) October (25) September (27) August (7)
တရားမင္းသခင္ - ၄၈။ ယဇ္
ယုံကြည်မှု နှင့် ယုံကြည်ရာ